အလိုအလျောက်တံခါး Radar China Manufacturers & Suppliers & Factory
အလိုအလျောက်တံခါး Radar - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း အလိုအလျောက်တံခါး Radar ထုတ်ကုန်များ)
လက်မှတ်: ISO9001, CE, SGS, TUV
Hofic အီလက်ထရောနစ် 24GHz အလိုအလျောက်တံခါး / High Speed တံခါး Radar Detector အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Hofic နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်: 0.5s ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP54 ထုတ်လွှင့်ကြိမ်နှုန်း: 24.125GHz အများဆုံး installation ကိုအမြင့်: <5meter...
Hofic အီလက်ထရောနစ် 10GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar အာရုံခံဆွဲယူ
Hofic အီလက်ထရောနစ် 10GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar Detector အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆွဲယူတံခါး Radar အာရုံခံ / အလိုအလျောက်ဆွဲယူအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Hofic နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်: 1.5s ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP54 ထုတ်လွှင့်ကြိမ်နှုန်း: 10GHz အများဆုံး installation...
အီလက်ထရောနစ် 24GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar
အီလက်ထရောနစ် 24GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar အသေးစိတ်: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Hofic နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်: 0.5s ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP54 ထုတ်လွှင့်ကြိမ်နှုန်း: 24.125GHz အများဆုံး installation ကိုအမြင့်: <5meter ထုတ်လွှင့်ပါဝါကိုသိပ်သည်းဆ: <5mw / cm2 ပါဝါစားသုံးမှု: <1W (VA...
24GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar
24GHz အလိုအလျောက်တံခါး Radar အသေးစိတ်: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Hofic နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်: 0.5s ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP54 ထုတ်လွှင့်ကြိမ်နှုန်း: 24.125GHz အများဆုံး installation ကိုအမြင့်: <5meter ထုတ်လွှင့်ပါဝါကိုသိပ်သည်းဆ: <5mw / cm2 ပါဝါစားသုံးမှု: <1W (VA...
အလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Radar အသေးစိတ်: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Hofic နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်: 0.5s ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: IP54 ထုတ်လွှင့်ကြိမ်နှုန်း: 24.125GHz အများဆုံး installation ကိုအမြင့်: <5meter ထုတ်လွှင့်ပါဝါကိုသိပ်သည်းဆ: <5mw / cm2 ပါဝါစားသုံးမှု: <1W (VA...
Radar Sensor ပါသော PVC အမြန်နှုန်းတံခါး
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် နေ့စဉ်တံခါးများကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်မည်။ PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးသည်အခြားသူများနှင့်များစွာကွာခြားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်သက်တမ်းရှည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မြန်ဆန်သောတံခါးများကိုဒေသများစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ PVC...
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏စီးပွားရေးအတွက် PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။ PVC အမြန်နှုန်းရှိသောတံခါးသည် ၁ မီတာထက်ပိုသောတံခါးဖွင့် / ပိတ်နိုင်သည်၊ ပါဝါကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သင်၏တံခါး၊...
အလိုအလျောက်တံခါးသည် Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
ထုပ်ပိုး: သစ်သားဖြစ်ရပ်မှန်, စက္ဏူထူ
Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box
ဆေးရုံအလိုအလျောက်တံခါးဆွဲယူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံခါးကိုလျှောစီတံခါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကဝိုင်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုအတွင်းစိတ်ဘောင်နှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုပျားလပို့ပြားနှင့်အတူစီတန်းတစ်ခုတည်းတပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်, စုံလင်သောကုသမှုမွငျ့မားရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိတျထားရှိပါတယ်, မှအရည်အသွေးမြင့် EPDM...
Hofic အလိုအလျောက်တံခါးမော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
အလိုအလျောက်တံခါး Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
အလိုအလျောက်တံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
ထုပ်ပိုး: စက္ဏူထူ / သစ်သားအမှု
အလိုအလျောက်တံခါး 50HZ-60HZ Servo မော်တော်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရေး Box ကို 1. Precision: စနစ်အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း overshooting တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ် 2.Stability:...
Servo မော်တော်အတူအလိုအလျောက်တံခါးထိန်းချုပ်ရေး Box ကို
Servo မော်တော်အတူအလိုအလျောက်တံခါးထိန်းချုပ်ရေး Box
အလိုအလျောက်တံခါး Servo မော်တော် 1. Precision: စနစ်အပြည့်အဝတံခါးပိတ်-ကွင်းဆက် servo ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှစ်ဆအန်ကုဒ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့, ဒီရှည်လျားလည်ပတ်မှုဘဝကိုသေချာစေရန်နှင့် operating စဉ်အတွင်း overshooting တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ် 2.Stability: စနစ်ပြည်တွင်းရေးဝါယာကြိုးရိုးရှင်းဖို့နဲ့ဝါယာကြိုးများနှင့် terminal...
ဆေးရုံလည်ပတ် ROOM တွင်အလိုအလျောက်တံခါးဆွဲယူ
ဆေးရုံလည်ပတ် ROOM တွင်အလိုအလျောက်တံခါးဆွဲယူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံခါးကိုလျှောစီတံခါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကဝိုင်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုအတွင်းစိတ်ဘောင်နှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုပျားလပို့ပြားနှင့်အတူစီတန်းတစ်ခုတည်းတပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်, စုံလင်သောကုသမှုမွငျ့မားရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိတျထားရှိပါတယ်, မှအရည်အသွေးမြင့်...
အီး Approved Radar စက်မှု Rolling အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
အကျိုးကျေးဇူးများ အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးများပိတျထားသော, အမြန်ဆုံး, 1.The လုံခြုံဆုံး။ မုန်တိုင်းအင်အားလေတိုက်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူအပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် 2.Designed ။ 3.Our တံခါးများကြောင့် operating...
စက်မှု Radar အာရုံခံကိုယ်ပိုင် Recovery ကို PVC ကြိတ်စက် Shutter
self-Repair တံခါးကုလားကာ: စက်မှု Radar အာရုံခံကိုယ်ပိုင် Recovery ကို PVC ကြိတ်စက် Shutter တံခါးများခန့်မှန်းရခက်သူတစ်ဦးနှင့်ကားကိုအသုံးပြုမှုအတွက်ကုလားကာလွဲသွားစေနိုင်ပါသည်, သို့သော်မူပိုင်ဒီဇိုင်းကိုအလိုအလျှောက်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု function ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ရှိသည်။...
အလိုအလျောက်တံခါး Radar အလိုအလျောက် Fast တံခါး Radar အလိုအလျောက်တံခါး induction Radar အလိုအလျောက် PVC တံခါး အလိုအလျောက်တံခါး Controller အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါး Radar အလိုအလျောက် Crystal တံခါး အလိုအလျောက် Store ကတံခါး